တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၁၇) ~ Htet Aung Kyaw
6:08 AM Htet Aung Kyaw2comments
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့နဲ့ ၂ ရက်နေ့ညတွေမှာ ဓားစာခံတွေအခြေနေ၊ သံရုံးသိမ်း သေနတ် သမားနဲ့ရတဲ့ ထူးထူးရှယ် အင်တာဗျုးတွေကို DVB က လွှင့်ပြီးလို့ လပိုင်းအတွင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ဖိတ်စာ တစောင် ကျနော့်ဆီရောက်လာပါတယ်။ အနောက်ဘက်ဒေသလို့ နယ်စပ်ကလူတွေက ခေါ်ကြတဲ့ (ထိုင်း နိုင်ငံကိုတော့ အရှေ့ဘက်ဒေသလို့ ခေါ်ကြပါတယ်) အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီကနေ ကျနော့်ဆီ ဖိတ် စာပို့လိုက်သူက မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ကိုစိုးမြင့်ပါ။
(သံရုံးသိမ်း သေနတ်သမား ၅ ဦးရဲ့ အသံကိုဖေါ်ပြထားတဲ့ အာက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် VOB စာစောင်)
ကိုစိုးမြင့်ဟာ နိုင်ငံရေးတက်ကြွတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းက ထိုင်းအဲဝေး လေယဉ်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားအောင် ကြိုးစားခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့၊ အတိုက်ခံနဲ့ အမြန်ဆုံးဆွေးနွေးဖို့ တောင်း ဆိုရင်းနဲ့ ဘန်ကောက်ကနေ ရန်ကုန်သွားမယ့်လေယဉ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလက္ကတားမြို့ဆီ မောင်းခိုင်းခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ (ရဲမာန်) နဲ့ ရဲထင်ကျော်တို့ဟာ လက်နက်တစုံတရာမကိုင်ဘဲ ဆပ်ပြာတုံးကို ဗုံးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ယူသွားခြင်း၊ ခရီးသည်တွေကို တဦးမှဒဏ်ရာရအောင် မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် အကြမ်းဖက် သမားအဖြစ် မသတ်မှတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ် ကြိုဆိုခံရသူတွေပါ။ (သူတို့အရင် ၁၉၈၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းကလည်း ကျောင်းသားလူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်နဲ့ရဲသီဟတို့ဟာ မြိတ် ကနေ ရန်ကုန်သွားမယ့် ပြည်တွင်းလေယဉ်တစီးကို ဗုံးအတုနဲ့ ပြန်ပေးဆွဲပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အူတာပို လေ ဆိပ်မှာ ဆင်းခဲ့ဖူးပါတယ်)။
အဲဒီလိုနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ ကိုစိုးမြင့်ခေါ် ကိုရဲမာန်ဆီကရောက်လာတဲ့ ဖိတ်စာမှာ ဖော်ပြထား တာကတော့ မဇ္ဈိမသတင်းဌာနကဦးစီးပြီး နယူးဒေလီမှာကျင်းပမယ့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆွေး နွေးပွဲကိုလာတက်ပါ။ သတင်းထောက်အတွေ့အကြုံတွေကို ရှင်းပြပေးပါတဲ့။ ကျနော်ပျော်သွားတာပေါ့။ ကိုယ်တခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့ အိန္ဒိယကိုသွားရမယ့်အပြင် မြန်မာစာအုပ်အတုကို တလတခါ ဗီဇာတိုး ဖို့ ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ဆီ သွားနေရတဲ့ဒုက္ခကနေလည်း ၃ လ လောက်သက်သာနိုင်တယ် မဟုတ်ပါ လား။
(ထိုင်းမှာနေတဲ့ မြန်မာစာအုပ်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီထွက်ရင် ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးရပြီး ဗီဇာ ၂၈ ရက် ပဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယတို့လို့ ခပ်ဝေးဝေးနိုင်ငံတွေကိုအထွက်ပြနိုင်ရင် ဗီဇာ ၃ လရပါတယ်)။ ဒါပေမယ့် ဖိတ်စာရတာနဲ့ ဒီတိုင်းထသွားလို့မဖြစ်သေး။ ပထမဆုံး DVB ဘန်ကောက်ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေ ဆီ တင်ပြရသေးပါတယ်။ ''ခင်ဗျားကို ပုဂ္ဂိုလ်အရဖိတ်တာလား၊ DVB သတင်းထောက်အဖြစ်ဖိတ်တာ လား'' လို့ မေးခွန်းထုတ်ပြီး DVB က သတင်းထောက်တဦးပို့ပေးပါလို့ မပြောပဲ ကျနော်အမည်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အရ တိုက်ရိုက်ဖိတ်တဲ့ အပေါ် သိပ်ကျေလည်ပုံမရပါ။
မောင်ရဲချစ်မှ မောင် လ၀က ချစ် အဖြစ်သို့
သူ့ဆီကခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုမှ အိန္ဒိယသံရုံးဆီသွားပြီ ဗီဇာလျှောက်ရပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပြည်ဝင် ခွင့်တင်းကျပ်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက် လျှောက်လွှာတင်လိုက်ကတည်းက ခန့်လန့် လန့်။ ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ချက်ချင်းမရပါဘူး။ ငြင်းပယ်တယ်လို့လည်းမပြောပဲ နောက်မှပြန် လာလျှောက်ပါဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟိုမှာက အစည်းဝေးစတော့မယ်။ ဒီတိုင်းထိုင်စောင့်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ကိုစိုးမြင့်ဆီအကြောင်းကြားတော့ သူနဲ့ခင်တဲ့ အိန္ဒိယလွှတ်တော်အမတ်တဦးက ကျနော့် ကို ဗီဇာပေးသင့်တဲ့အကြောင်း သံရုံးဆီ စာရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
(ဒေလီမြို့က နာမည်ကြီး အိန္ဒိယဂိတ်)
အဲဒီစာကိုယူပြီးထပ်သွားတော့ သံရုံးအတွင်းဝန်က သိပ်မကြည်။ ''မင်း ဘာကောင်လဲ'' ဆိုတဲ့ အထာ မျိုးနဲ့ ဟိုမေးဒီမေးလုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်ဝင်ခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ရဲဘော်တချို့ကို မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေက စာရေးပေးရင် ဘန် ကောက်မြန်မာသံရုံးက ဗီဇာထုတ်ပေးပါ့မလား။ ပိုတောင်အခြေနေ ဆိုးသွားမလား။ ဒီဆောင်းပါး ရေးရင်းနဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ သြဇာကွာခြားပုံအကြောင်း စဉ်းစားမိတာပါ။
အိန္ဒိယခရီးစဉ်က အတော်အဆင်မပြေတဲ့ ခရီးစဉ်လို့ပြောရမယ်။ ဗီဇာရပြီး ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကနေ အထွက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာစာအုပ်ကအတုဆိုတော့ လ၀က က ရစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ မြန်မာ တချို့ လာဘ်ငွေပေးတာမျိုး ရှိဖူးသလားမသိပါဘူး။ ''မင်းကမြန်မာဆိုတော့ ငါ့ကို Marlboro တထောင့် Duty Free ကနေ ၀ယ်ပေးခဲ့ပါ'' လို့ ပတ်စပို့ပေါ် တုံးထုနေတဲ့ လ၀က အရာရှိက ပြောပါတယ်။
ကျနော် အတော် ဒေါကန်သွားပါတယ်။ ''ငါ သတင်းထောက်ဆိုတာ မင်းမသိဘူးလား။ သတင်းရေး လိုက်ရင် မင်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်ထား'' လို့ စိတ်ထဲကပြောလိုက်ပေမယ့် အသံက အပြင်ကို ထွက်မလာပါ။ ဒီနေရာမှာသတင်းထောက်လို့သွားပြောရင် ပိုရှုတ်ကုန်မှာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ အတော်တန်သိတဲ့ သတင်းထောက်ဖြစ်နေပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာမဟုတ်။ သတင်းထောက်ကတ်လည်း ဘာမှပြစရာမရှိ။ ပြန်ပြောရင် အရစ်ရှည်ပြီး ပတ်စပို့အတုကိုင်မှုနဲ့ အဖမ်း ခံရဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မတရားမှုကို ဖော်ထုတ်ရမယ်၊ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်း သမားတွေရဲ့ ကျင့်ထုံးကို ခဏဘေးဖယ်ပြီး သူပြောတဲ့အတိုင်း မာဘိုရိုတထောင့် ၀ယ်ပေးလိုက်ရပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ လ၀က က မဆိုးပါဘူး။ ကျသင့်သလောက်ငွေကို ပြန်ပေးပါတယ်။ အင်း သူတို့လည်း ဂျုတီဖရီး ဆိုင်ဘေးမှာ ထိုင်နေပြီး ဂျုတီဖရီး ၀ယ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘ၀ဆိုတော့ ဒါမျိုးလေး စားပေါက်ထွင် ထားတာ ဖြစ်မှာပေ့ါလေလို့တွေးပြီး စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာစာအုပ်အတုကိုင်ပြီး ခရီး သွားရတဲ့ ဘ၀တုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်များစွာထဲက တခုအဖြစ် အခုချိန်ထိ သတိရနေဆဲပါ။
ထိုင်း လ၀က ပြီးတော့ အိန္ဒိယ လ၀က။ ဒေလီလေယဉ်ကွင်းအ၀င်မှာ အားလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးမှ ကျနော်တဦးတည်းကို လ၀က က ခေါ်ထားပါတယ်။ လေယဉ်ပေါ်မှာ မြန်မာဆိုလို့ ကျနော်တဦး တည်းပါ လာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့်စာအုပ်အတုက အတော်ရွဲနေလို့ သံသယ၀င် ပြီး ခေါ်ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လ၀က ရုံးထဲမှာ ထိုင်စောင့်နေရတာ မိနစ် ၃၀ လောက်တောင် ကြာမလားပါပဲ။ ''ဒီဖိတ်စာပို့တဲ့လူနဲ့ မင်းနဲ့ ဘယ်လို တော်စပ်သလဲ'' ဆိုတာအပါဝင် မေးခွန်းပေါင်း များစွာ မေးပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြလို့မရတာနဲ့ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ရေးပေးထားတဲ့ စာမိတ္တူကို ထုတ်ပြ လိုက်မှ အိုကေ သွားပါတယ်။ ပစ္စည်းရွေးတဲ့နေရာရောက်တော့ ကျနော့်အထုပ်အပိုးတွေက မရှိတော့။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ဒီက လေယာဉ်ကွင်းက ဘန်ကောက်လောက်မသားနား။ အပြင်အဆင်ကလည်း ခပ်ရှုတ် ရှုတ်ဆိုတော့ ဘယ်နားလိုက်ရှာရမှန်းမသိ။ အဲဒီအချိန်မှာ သုံးဘီးကားရောင် ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ လူငယ် တဦးက ကျနော်လက်ကိုလာဆွဲပြီး ဟောဒီမှာ ခင်ဗျားအိတ်တွေလားလို့ လာမေးပါတယ်။
''ဟုတ်တာပေါ့။ သိမ်းထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ'' ဆိုပြီး အိတ်တွေကိုယူတော့ ဒီတိုင်းမရဘူးလို့ ဆို ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ ခန့် သူထိုင်စောင့်ပေးထားလို့ ကျနော်အိတ်တွေအခုလိုပြန်ရတာ။ နို့မိုရင် သူများခိုး သွားပြီ။ ဒီအတွက် ဒေါ်လာနည်းနည်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလို့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ ကျနော်မှာ က ဒေါ်လာမပါ။ ထိုင်းဘတ်ငွေပဲပါတယ်ဆိုတော့ ဘတ် ၁၀၀ ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ဘတ် ငွေကို မမြင်ဖူးတော့ လက်မခံပါ။ ကျနော်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်။ အဲဒီ ဘတ် ၁၀၀ က ရူပီး ၁၀၀ ထက်ပို များ တယ်လို့ပြောပြီး အထုတ်ဆွဲကာ အတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
(စာရေးဆရာမောင်သာရနှင့် ဆရာဦးမောသီရိတို့ကို ဒေလီမြို့မှာ အတူတွေ့ရစဉ်)
အပြင်ရောက်မှ သူ့လို သုံးဘီးကားအရောင်ဝတ်ရုံသမားတွေ အများကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ ''ကူလီ'' ယူမလား ဆိုတဲ့ အသံကိုကြားမှ ''သြော် ဒါ ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ကူလီအလုပ်သမား တွေပဲ'' ဆိုပြီး သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အခုထိ အိန္ဒိယမှာ ကူလီများစွာရှိနေဆဲ၊ ကူလီအဖြစ်ခေါ် နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်လေယဉ်ကွင်းက အပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့တူ မလားပါပဲ။ဘန်ကောက် အပါဝင် နိုင်ငံတကာလေယဉ်ကွင်းမှာတော့ ဒေလီနဲ့ ရန်ကုန်မှာလို အလုပ်သမားတွေမထားတာ့ပါ။ အားလုံး ကိုယ်အိတ် ကိုယ်သယ်စနစ်ဖြစ်သွားပြီ။
လေယဉ်ကွင်းမှာ ကျနော်ကိုလာကြိုသူက ဒေလီအခြေစိုက် DVB သတင်းထောက် ကိုသက်နိုင်နဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းတဦး။ သုံးဘီးကားငှားတော့ ဒေလီက သုံးဘီးက ဘန်ကောက်ကသုံးဘီးလို မလွတ်လပ်။ မှောင်ကုတ်ကုတ်နဲ့ တမျိုးကြီး။ လမ်းတွေကလည်း ဘန်ကောက်လိုမချောမွေ့။ အဆိုးဆိုးကတော့ လမ်း လယ်ခေါင်ပေါ် နွားတွေအိပ်နေရရင်၊ နွားအုပ်ကြီးလမ်းလည်မှာ လျှောက်နေရင် တရေးတမော စောင့် ပေတော့။ ဒီနိုင်ငံမှာ နွားကိုအထူးဦးပေးစားသတ္တ၀ါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ''ဟဲ့ နွား'' ဆိုပြီး တုတ်နဲ့သွားရိုက်လို့မရပါ။
ပြီးတော့ ဒေလီက ကားဆရာတွေ ဟွန်းတီးသလားမမေးနဲ့။ ကျနော်က ဘန်ကောက်မှာ နေလာသူ ဆိုတော့ ကားဟွန်းတီးသံ မကြားရတာကြာပါပြီ။ အခု ရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကအပြန်မှ စဉ်းစားမိတာက ဒေလီဟာ ဘန်ကောက်နဲ့မတူပဲ ရန်ကုန်နဲ့ ပိုတူနေခြင်းပါပဲ။ ကားတွေက ဟွန်းနင်းကန်တီးပြီး စည်း ကမ်း သိပ်မရှိပါ။ ယာဉ်ထိန်းရဲရဲ့ခရာသံကို နားမထောင်တဲ့အတွက် စည်းကမ်းဖောက်တဲ့ကားကို ရဲက သူရဲ့တုတ် ကောက်နဲ့ လှမ်းထုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
မြို့ထဲရောက်တော့ မြန်မာရပ်ကွက်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဗစ်ကပ်ပူရီအရပ်ရှိ ကိုစိုးမြင့်တို့အိမ် (အဲဒီအချိန်က အိမ်ခန်းဟာ ရုံးခန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်) မှာ တည်းပါတယ်။ အိန္ဒိယကအခန်းတွေက ဘန်ကောက်မှာ ကျနော်တို့နေခဲ့တဲ့ ABSDF ရုံးခန်းတွေလောက်တောင် မသားနားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒေလီမှာ ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ဘန်ကောက်မှာလို ရဲဘယ်အချိန်ဝင်ဖမ်းမလဲဆိုပြီး တချိန်လုံးတွေးပူနေ စရာမလိုတဲ့ အချက်ပါ။ လုံချည်ဝတ်၊ မြန်မာစကားပြောပြီး ကွမ်းဝါးလိုက်၊ ဆေးလိပ်သောက်လိုက်သွားနေလည်း ဒေလီရဲက မဖမ်းပါ။ ဒီတချက်တည်းနဲ့တင် ဒေလီဟာ ဘန်ကောက်ထက် သာသွားပြီလို့ ကျနော်ထင် ပါတယ်။
နောက်တရက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်လာကာစ နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ မောင် သာရနဲ့ ဘန်ကောက်နေရှင်းသတင်းစာမှ နာမည်ကြီးသတင်းထောက် ဒွန်ပသန်တို့ရောက်လာပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ ဟိုတယ်မှာသွားတည်းပြီး ဆွေးနွေးပွဲတက်ခဲ့ပေမဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းရာတွေကို ကျ နော်မမှတ်မိတော့ပါ။ မှတ်မိနေတာကတော့ ဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့ရက်တွေမှာ ဆရာမောင်သာရက ဦးမော သီရီအိမ်မှာတည်းပြီး ကျနော်က ဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင်တို့အိမ် (ကိုဇော်ဝင်းအောင်ဟာ FTUB ရဲ့ အ နောက်ဖက်ဒေသကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အပြင် DVB ဒေလီဗျုရိုရဲ့ တာဝန်ခံလဲဖြစ်ပါတယ်) မှာတည်းနေ စဉ် ဒေလီရှိ မြန်မာအသိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
Two Burmese students who hijacked an airliner to dramatize human rights abuses in their homeland surrendered to the Thai security forces Saturday afteranine-hour standoff.
The students freed all 83 passengers and crew unharmed after releasingalist of political demands for the Burmese military Government.
It was not immediately known what convinced the hijackers to end the ordeal but earlier they had asked Thai authorities to let them publish their demands, which included release of political prisoners in Myanmar, formerly Burma.
They two hijacked the airliner on Friday onaflight from Mergui to the Burmese capital, Yangon, formerly Rangoon. The plane,aFokker 28, was diverted to U-Tapao,amilitary base 80 miles southeast of Bangkok on the Gulf of Thailand, where the hijackers freed 33 of the 83 passengers, then threatened to blow the plane up unless their demands were met.
They demanded that Myanmar's Government, which took power 13 months ago, release all political prisoners, send all troops back to barracks and liftanationwide overnight curfew.
Sunday, 30 September 2007, 6:51 pm
Today, Soe Myint lives in India's capital, New Delhi, as editor- in-chief of Internet-based Mizzima News, which offers online and print reports in Burmese and English, plus photos and video.
July 15, 2014 at 1:28 AM Reply
"The struggles of Burma's ethnic nationalities for self- determination and democracy, by taking up armed struggle for years, are legitimate struggles, given the facts of how they were finally forced to take up the armed struggles, how they were -- and are -- brutally suppressed in Burma by the central government," Soe Myint said.